« FOROCHES » SAMBAVA : Tovolahy 17 taona avy namonjy lanonana maty voatsatok’antsy
Any amin’ny faritra Sava indray izao no anaovan’ireo andian-jatovo antsoina hoe « Foroches » ny asa ratsiny. 9 janvier 2018
Omaly tokony ho tamin’ny 1 ora maraina lasibatry ny andian-tanora mitam-piadiana ny tovolahy iray antsoina hoe Sylvana vao 17 taona monja raha avy namonjy lanonana tao amin’ny « Disco Cabana » ka hody any an-trano fonenany ao Antanambao-Antaimby.
Nandrasan’ireto andian-jatovo ireto teo amin’ny toerana maizina akaikin’ny tetezana iray i Sylvano ka avy hatrany dia notsatohan’izy ireo antsy. Mbola niezaka nitsoaka sy niantso vonjy ihany i Sylvano fa nitolefika afaka metatra vitsivitsy niala ilay tetezana. Nameno ny arabe ny rà. Tsy tonga teny amin’ny hôpitaly akory dia tapitra ny ainy. Araka ny loharanom-baovao nisy naheno ny antso vonjy nataon’i Sylvano ireo namany ka nanenjika avy hatrany ireo andian-tanora nahavanon-doza ka ny iray amin’ireto farany no tratran’izy ireo ary niharan’ny fitsaram-bahoaka. Soa ihany fa tonga haingana ny zandary fa raha tsy izay dia maty. Tsy niandry ela akory dia nanao ny asany ny zandary ka tamin’ny 3 ora maraina dia tanora iray no voasambotra tao Antsirabe.
Tamin’ny 4 ora maraina tanora iray hafa fantatra amin’ny anarana hoe Arnaud na « Mr le maire » no voasambotra ihany koa. Nilaza ity farany fa tsy nandray anjara tamin’ny famonoana an’i Sylvano fa nambaran’ny tanora anankiray hafa antsoina hoe Badôry izay voasambotry ny zandary tamin’ny 11 ora sy sasany maraina. Niandry faty ny lehilahy tamin’ny fotoana nisamboran’ny zandary azy. Omaly hatramin’ny 3 ora tolakandro dia tanora miisa telo no voarohirohy amin’ny famonoana an’i Sylvano no voasambotry ny zandary. Mbola mitohy ny fikarohana ny ambin’ireo andian-tanora nahavanon-doza ataon’ny zandary.